ပြောတတ်သလိုဒဲ့ပြောမည်(မယောင်ရာဆီလူး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ပြောတတ်သလိုဒဲ့ပြောမည်(မယောင်ရာဆီလူး)
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Jul 18, 2013 in My Dear Diary, Think Different | 20 comments
တလွဲ ဆေးဆီလူးပေးခြင်းဖြင့် အနာတခြားဆေးတခြား ဖြစ်ရပ်မျိုး
ဟူ၍ တင်စားထားသည်။ ယောင်ကိုင်းနေသောအနာအတွက်လည်း
လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ကျော်က အဖြစ်အပျက်လေးတခုကိုပြောပြလို
ပါသည်။ ကျွန်တော်နေထိုင်သောရပ်ကွက် သည် ရန်ကုန်-မန္တလေး
ရပ်ကွက်၏မြောက်ဘက်တွင် မန္တလေးမြို့ အတွင်းပိုင်းရပ်ကွက်ကြီး
လှိမ့်၍ဝင်လာလေ့ရှိသည်။ ရေသည် တရက်နှစ်ရက်နှင့်မကျတတ်။
တခါတရံ တပတ်ခန့် (မိုးဆက်မရွာပါက)နေမှရေကျသည်။
ကြောင်းမှာ ကားလမ်းမ၏အရှေ့ဘက် ကိုလံဘို မြောင်းမကြီးဆီ
စီးဝင်ရာ လမ်းကူးမြောင်းသည် လိုအပ်သည်ထက် သေးငယ်နေသော
ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြောင်းမှာသေးငယ်ရသည့်အထဲ အမှိုက်များတစ်
ဆို့နေတတ်ခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါကျနော်တို့ အမျိုးသား
ကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်မူ့ စီမံခန့်ခွဲမူ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မူ့
အများလက်ခံနိုင်အောင် သဘောမျိုးဆောင်အောင် ဘုရားပွဲများ
အလူအတန်း သာရေးနာရေးများတွင် ပါဝင်သည်။တချို့ကိစ္စများတွင်
ကလေးစားလာသည်။ရပ်ကွက်မှ (သူကြီးပင်လျှင်) သူစကားနား
ရသည်မှာ သူ၏ ကျွဲပါဝါကြောင့်ဟုဆိုသည်။) ဤသို့ဖြင့်ဆောင်းကုန်
ရပ်ကွက်အတွင်း ရပ်ကွက်လူကြီးအားခေါ်၍အိမ်ပေါက်စေ့ ရေမြောင်း
အိမ်များ၏ ၉၀ % မှာ အပိုရေဆိုးပင်ထွက်စရာမရှိရှာ။ ကျနော်တို့
အိမ်အပါ အဝင် လေမူတ်စက်သုံးရေတွင်းရှိသူများပင်လျှင် ရေပို
ရေဆိုးများများအိမ်အပြင်သို့ မထွက်နိုင် ။မိုးတွင်းမြေစိုသည့် အခါ၌သာ
စေရန်မြောင်းဖြစ်ရုံ ဖော်ထားသည်နှင့် မြောင်း ဆယ်ပေခန့်တွင်ရေများ
အဆိုပါ ကျွဲကြီးလည်း (ကျွဲဟုပဲအလွယ်ရေးပါရစေ) အိမ်လွတ်သော
နေရာများ၌ ဘယ်ကရလာသည်မသိသော ဘက်ဖိုး ကြီးတစီးနှင့်မြောင်း
သည်။ ကိုလံဘိုမြောင်းကလည်း သူ့ထဲရေဝင်ဖို့မပြောနဲ့။သူမြောင်းထဲက
ထုတ်မြောင်းဟုဆိုနိုင်သော ကားလမ်းကူးမြောင်းသည် ကျဉ်းကကျဉ်း
လာသည်။ရပ်ကွက်အတွင်း လမ်းတွေရေမြုပ်ကုန်သည်။ လမ်းပေါ်သွား
မရှိသော်လည်းကျွဲကြီးမြောင်းကို အမှတ်မရ ။မေ့၍မြောင်းထဲကျသူ
ဟုတ်သည်လေ။စီးထွက်ရမည့်ရေပမာဏ နှင့် စီးထွက်ရမည့်အပေါက်
ပြီ။ သူ၏မြောင်းများကတော့အခု မရှိတော့။မရှိတော့ပါဘူးဗျာ။
ဒါလေးပြန်စဉ်းးမိတော့ ဒီနေ့နေရာအတော်များများမှာ ဒီလိုဖြစ်
စာနယ်ဇင်းတွေ ပြည်သူတွေကို နည်းမှန်လမ်းမှန်အသိပေး
ရာဆီလူး လုပ်နေကြတဲ့သူတွေအထဲ ဒို့ ကဇက်မပါမိစေဖို့
စနစ်ကြောင့် မှုတ်ဖူး စနစ်ကြောင့်မှုတ်ဖူး
အာဇာနည်နေ့ လုပ်လာတာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်တာတောင် အာဇာနည် ၆ ယောက် ထပ်ပေါ်လာလို့လား။ တကယ်ဆို ဂဠုန်ဦးစောနေ့ ပဲ လုပ်သင့်တာ။ စဉ်းစားကြည့် ဦးစော၊ စိန်ကြီး၊ ရန်ကြီးအောင်၊ ဘညွန့် ၊ သုခ လို လူမျိုးတွေ ဘယ်ခေတ်မှာမှမျိုးတုန်းမသွားဘူး။ အာဏာဆီနေ့ တို့ မမေ့ ပေါ့။
ဒါဆိုရင်ရော ရောင်ရာ ဆီလူးမိလားဟမ်???
အဘဖော နဲ့ ကိုမတ် ကို ဆက်သွယ်ဘာ …ေိေိ
ရွေအိလေး သူရို့က မာဆတ်မာ ဆီလူးပီး နှိပ်ပေးတဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတာလား…
အီနေရာတွင် ဖူဖူကျော်သိန့် အိ လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ပါ သချင်းကို ကျကျနန ဆိုပျသီဟု မြင်ယောင်ကျိပါလေ….
မြင်ယောင်ကျိ…2pieces လေးနဲ့ ဆီပုလင်းလေးကိုင်ပီး… ဟို ပဲမြစ်မော်ဒယ်ကောင်လေးတောင် အရှုံးပေးသွားမယ်
ညည်းအေ … အညွှန်းကောင်းလို့ ရောက်ရရှာတဲ့ …. ကမတ်ကို ဆွဲထည့်ဇယာလား …. ။
မြောင်းပိတ်တဲ့ ကိစ္စကို မြောင်းပိတ်တဲ့ ကိစ္စလို့ပဲ ရိုးရိုး တွေးပြီး … ပွားပါမည် ။ ဒန်တန်တန် …
မြေနိမ့်ပိုင်းလည်းဖြစ် ၊ မြောင်းကလည်းသေး ၊ ဒီကြားထဲ အမှိုက်သရိုက်တွေကြောင့် ရွာသမျှ မိုးရေတင်ကျန်ပြီး ရေကြီးနေတဲ့ ရပ်ကွက်မှာ (အသစ်ပြောင်းလာတဲ့) ကျွဲပါဝါရှိသူက မြောင်းတွေချဲ့ ပြီး ထပ်ဖောက်တာ …. ဘေးထိုင် ဘုပြောလျှင်တော့ မလိုအပ်ပဲလုပ်တယ်ပေါ့လေ ။
ဘေးထိုင် ဘုပြောတဲ့ လူကိုလည်း အပြစ်မဆိုသာဘူး …ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ကိုယ်မြောင်းဖော်ဟေ့ ဘာညာဆို … ကိုယ်က ၀င်မလုပ်ပဲထိုင်နေရင် ရုပ်ပျက်တာပေါ့နော် …ကိုယ့်အိမ်အတွက် ကိုယ်မြောင်းဖော်တာ …လုပ်ခရမယ်ဆိုလျှင်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာပေ့ါ ။ရေ၀ပ်တဲ့နေရာမှာ နေသားတကျရှိခဲ့ပြီမိုလို့ပဲလို့ ဖြည့်တွေးကြည့်တယ် ။
ဟို ကျွဲလူကြီး … သူလည်း သူ့စကားအောင်ဖို့ စည်းရုံးရေးဆင်းဖို့ သာရေးနာရေးတွေလုပ်ပြီး စည်းရုံးခဲ့တယ် … ။ အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်းတာပဲ ပြောပြော … ဘာသိဘာသာ မနေပဲ … ဗိုလန်တီယာထလုပ်တာကိုတော့ သဘောကျတယ် ။ ချိန်ဆတတ်တဲ့ ဥာဏ် မရင့်သန်လို့ ၊ မြောင်းကျယ်ကြီးတူးပြီး ရေဆက်ပိတ်နေတာကတော့ ၊ တပိုင်းပါ ။
သူ့ဥာဏ်မှီသလောက်လေး မြောင်းထပ်ချဲ့ဖို့ စဉ်းစားတာကိုတော့ သဘောကျတယ် ။ စေတနာပါလို့လား ၊ အကျိုးမြတ်ခံစားခွင့်ရှိလို့လားဆိုတာတော့ အဲ့ကျွဲလူကြီးပဲ သိပါမယ် ။
ရန်ကုန်မှာ…နောင်၁၀နှစ်.. အနှစ်၂၀..၃၀.. ရေတွေကြီးပြီး.. ရေနစ်မယ်ဖြစ်ပါကြောင်း…
ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတာမို့.. အာတိတ်စက်ဝိုင်းကရေတွေပျော်နေတာ.. နောက်နောင်ဆို.. အာရှ-ဥရောပ-အမေရိကရေကြောင်းလမ်းသစ်တောင်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာပဲ..
Warmer climate to open new Arctic shipping routes by 2050: study …
Mar 8, 2013 – WASHINGTON (Reuters) – The quickest way to get goods from Asia to the U.S. East Coast in 2050 might well be straight across the Arctic, …
ပြဿနာက.. တက်လာတဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကြောင့်… ကမ္ဘာကျော်ဖလော်ရီဒါကမ်းခြေတွေအကုန်ရေမြုတ်မှာပါ…။
Florida Keys prepare for sea level rise – Yahoo! News
Jul 2, 2013 – From Yahoo! News: KEY WEST, Fla. (AP) — Hurricane storm surge can inundate the narrow, low-lying Florida Keys, but that is far from the only …
ကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့.. ကမ္ဘာကျော်ကမ်းခြေတွေလည်းရေနစ်မှာမို့.. အဲဒီမှာနေတဲ့..ဘီလီယံနာတွေကတော့.. ကျောက်သဲတွေ.. မီလီယံချီတန်ဖိုးဝယ်ပြီးဖို့နေကြလေရဲ့…
by Kenneth Weiss – in 45 Google+ circles
Dec 31, 2008 – Broad Beach has long beenascenic backdrop to Malibu’s public access wars. The tranquil rhythm of surf has been routinely shattered by …
ဘာလုပ်ထားကြသလည်း.. ဘာပြင်ဆင်ထားကြသလည်း.. သူငယ်ချင်း..
အို ဘာပြင်ရမလဲ ဒဂျီးကလဲ ဒီလိုပဲ ဟိုလိုဒီလိုနဲ့ ပီးသွားမှာပေါ့
Wow အဖြေအတိုင်း ဘာမှပြင်မယ်မထင်၊ အဲဒီတော့ သဂျီးပြောတဲ့ ဘာလုပ်ထားသင့်သလဲ မပူနဲ့ဗျ၊ အဲဒီနှစ်တွေ အဲဒီအခါရောက်ရင် နိုင်ငံခြားက အခုလိုကားတင်သွင်းမှု့တွေ မလုပ်တော့ဘူး၊ လမ်းပေါ်မောင်းပြီးသွားလို့ရအောင် မော်တော်ဘုတ် လှလှလေးတွေ အစိုးရက တင်သွင်းခွင့်ပေး မှာပေါ့ဗျာ။
သူကြီးပြောမှ us ကလူတချို့ ကမ္ဘာ ပျက်တော့မယ်။
နဲ့သူကိုး။ နောက် လူဦးရေအဆမတန်ပေါက်ကွဲနေလို့
ထောက်ပြတယ်။အမေရီကန်ရဲ့ တရက်တာ အစားအသောက်
ပြုန်းတီးမူ့က အာဖရိက ဒေသကို တလကျွေးထားနိုင်
သင့်ရုံတွေး ပြီးသင့်ရုံ နေထိုင်ကြရင် အကောင်းဆုံး
ဆိုပေမဲ့ (ပါပူဝါကျွန်းဟုထင်ပါသည်။) တကယ်တမ်း
(ပင်လယ်)ကို နှစ် ၁၀၀ တိုင်အောင်ရေမမြုပ်နိုင်ဘူးလို့
မြောင်းမ(ထွက်ပေါက်ကို) ချဲ့ဖို့ ကြိုးစားရမှာ။
ဒီအတွက် စည်ပင်တို့ ဘာတို့ ကိုစာတင် ခွင့်ပြုမိန့်တောင်း။
စသည်ဖြင့်လုပ်ရမှာကို အကြံပြုပါရဲ့နဲ့ ရုံးကနားသွားဖို့
တို့ ဘာတို့ ကြတော့မျက်နှာအပျက်မခံချင်ဘူးထင်ပါရဲ့။
မလုပ်ရမဲ့ဟာလုပ်လို့ ဒုက္ခ အပိုတောင်များလာတယ်။
မြောင်းထဲကျတယ်။ နောက်ရေကျချိန်မှာ မြောင်းထဲမှာ ရေကျန်တယ်။
အဲဒီမြောင်း မရှိရင် ခြောက်သွေ့ရမှာ ။နဂိုကထက်ရေဝပ်တဲ့ရက်ပိုလာရတယ်။
နောက် သူရဲ့ စေတနာ စည်းရုံးရေးက “ငါစွဲ မကင်း”ဘူး။ အကျိုးလိုလို့ညောင်ရေလောင်တာ။
သူမရှိခင်တည်းက ဒီမြောင်းမကြီးထွက်ပေါက်ကို မခိုင်းရပဲ ရေဝင်တိုင်း သွားသွား
ပြီးအမှိုက်ရှင်းရှင်းနေကြတာ။ အထက်ထိမပေါက်ရောက် (အမှန်က မပတ်သတ်ချင်တာ)
မယောင် ရာ ဆီ လူးတဲ့ အထဲဂဇက် ပါ မပါတော့
မ ယောင်ရာ ဆီ လူး မိတဲ့ အဖြစ်တွေ ရှိတယ်ဗျာ
အေးလေဟယ်ငါတို့လဲ ၀င်ဝင်လူးမိနေတော့ ဆင်ခြင်စရာပေါ့အေ။
လူဂဒေါ့လူဂေါင်းဗျ.. စနစ်မှားနေတာဗဲရှိဒါ… ကျုပ်တို့ သဂျီးလိုပေါ့ဗျာ… အတိတ်ကံပါလို့ လူဂေါင်းတော့ ဖြစ်ပါရဲ့ သိတဲ့နည်းမှားနေတော့ ခက်အိ….
ဘာမှမလုပ်ပဲဘေးထိုင်ဘုပြော ဟိုလူလုပ်နိုးနိုးဒီလူလုပ်နိုးနိုးထက်စာရင်တော့ သူတနိုင်တပိုက်အကြံနဲ့ကြိုး စားကြည့်တာပါ။ ရေ၀ပ်တယ်ဆိုတာရေနှုတ်မြောင်းပိတ်လို့ဆိုတာ လူတိုင်းလက်ခံတဲ့ ယေဘုယျသဘောပါ။ အခုဒီရပ်ကွက်ပိတ်တာကတော့ စည်ပင်လုပ်မှရမှာမို့ သူ့အကြံမအောင်တာပါ။ တကယ်ရေနှုတ်မြောင်းလို အပ်တာဆိုရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ မယောင်ရာဆီလူးထက် ဘေးထိုင်ဘုပြောကပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။
လိုနေတဲ့ မြောင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းစနစ်မကျတာအမှန်